Xafiiska Difaaca Xuquuqul Aadanaha Puntland oo sheegay in aan wakhti ku filan la siin dacwadda ka dhanka aheyd xildhibaannadii xasaannada laga qaaday – Kalfadhi
Xafiiska Difaaca Xuquuqul Aadanaha Puntland, ayaa gar-waaqsaday in cabashada siddeedii xildhibaan ee xasaannada lagala noqday iyo qareennadooda ay tahay mid leh sifo sharci, taas oo waafaqsan xaqa dacwadda iyo is-difaaca ee ku cad qodobka 25-aad farqadiisa 2-aad ee Dastuurka Puntland.
Xafiiska ayaa sheegay in muwaadinka xuquuqdiisa siyaasadeed iyo mida xil-qabasho la hakin karo, marka qofka maxkamadi ku riddo xukun ciqaabeed oo kama dambeys ah, oo ah noocyada lagu lumiyo xuquuqda siyaasadeed iyo xil-qabasho ee ku cad Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed.
Xafiiska Difaaca Xuquuqul Aadanaha Puntland, ayaa intaasi sii raaciyay in xukun maxkamad sare uusan aheyn mid ciqaabeed, oo lumin karta Xuquuqda Siyaasadeed iyo Xil-qabasho.
Eeddii Ciqaabta ahayd ee Xafiiska Xeer-ilaalinta uu kaga codsaday Baarlamaanka Puntland in xasaannada lagaga qaado, siddeeda xildhibaan aan loo adeegsan sidii hab-raaca sharciga ahaa, isla markaana aan la waafajinin go’aanka maxkamadda sare.
Ma jirto sharciga meel ay ku qoran tahay in dacwad maamul qaadisteeda iyo go’aan gaaristeedu ay kaani karto xanaanad ka xayuubin ama lumin karo xubinnimo. Xafiiska ayaa dhinaca kale xusay in aan wakhti ku filan la siin dacwadda ka dhanka ah xildhibaannada.
Xildhibaannada waxaa lagu eedeeyay in ay is hor-taageen kulan xukuumadda lagula xisaabtami lahaa, isla markaana ay jabiyeen qodobo kamid ah Dastuurka maamulka balse xildhibaannada ayaa iska fogeeyay dhammaan eedaha loo jeediyay.
Madaxweynaha Hirshabelle iyo Guddoomiyaha Midowga Musharaxiinta oo ka wadda-hadlay doorashooyinka